उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने « प्रशासन
काठमाडौं । सरकारले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । डा. गोविन्द केसीको १३ औं अनशन टुंग्याउन गरेको सहमतिअनुसार सरकारले अध्यादेशबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले अध्यादेशबाट कानुन ल्याउनुको कुनै अर्थ नभएको बताए । निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने भएकाले अहिले अध्यादेशबाट ल्याउनुको तुक नभएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो कुरा यो संसद्मा पेस नै हुँदैन, त्यतिकै भुस हुन्छ । पेस भयो भने पनि हामी यसमा संशोधन गर्छौं,’ पाण्डेले भने, ‘अध्यादेश डा. गोविन्द केसीलाई बेबकुफ बनाउन मात्रै ल्याउन लागिएको हो ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।